ओली-प्रचण्डसँग गाउदा जीवन शर्मालाई कारबाही, दुर्गादेवीलाई उन्मुक्ति ? « हाम्रो ईकोनोमी
ओली-प्रचण्डसँग गाउदा जीवन शर्मालाई कारबाही, दुर्गादेवीलाई उन्मुक्ति ?
केपी ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा गीत गाएबापत कारबाही गरिएको हो भने यो झनै मजाक भयो ।
केपी ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी तथाकथित तालमेल गरेर श्रीमती दुर्गादेवी पौडेललाई सांसद बनाई संसदमा पठाउन हुने, विचरा जीवन शर्माले उहाँहरूको उपस्थितिमा गीत गाएकोमा भने कारबाही खेप्नुपर्ने रु ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा दैनन्दिनजस्तै संसदमा भाषण गरेकोमा आफ्नी श्रीमतीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि उन्मुक्ति नै प्राप्त भइरहन्छ
सत्तारुढ नेकपाका युवा नेता सूर्य थापाले जनताका प्रिय जनगायक जीवन शर्मामाथि नेकपा(कसाल) ले कार्यकाहि गरेको भन्ने कुराप्रति चासाे व्यक्त गरेका छन् ।
एमवी सिंहले जीवन शर्मालाई केपी ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा गीत गाएबापत नै कारबाही गरिएको हो भने यो झनै मजाक भएकाे भन्दै नेता थापाले ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा दैनन्दिनजस्तै संसदमा भाषण गरेकोमा आफ्नी श्रीमतीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि उन्मुक्ति नै प्राप्त भइरहन्छ ?? भनेर नेकपा(कसाल) का महासचिव एमवी सिंहलाई प्रश्न गरेका छन् ।
नेता थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन् ।
जीवन शर्मा उर्फ रामकृष्ण आचार्यमाथि नेकपा(मसाल)द्वारा कुनै कारबाही गरिएको हो कि होइन ?
एमवी सिहको वक्तव्यले झनै कन्फ्यूज्ड बनायो ।
मृत्युपछि वा अनिश्चितकालीन निश्कासनमा मात्रै खुला जानकारी गराउने जनवादी केन्द्रीयता १८ औं शताब्दीको अभ्यास हो ।
सूचना प्रविधिको आजको युगमा यसमा सामयिक परिमार्जन अपरिहार्य छ ।
जीवन शर्मा अर्ध भूमिगत भएर त सिमली छायाँ झरनाको चिसो पानी र लेफ्ट राइट कदम बढाऊ आदि कालजयी र जनप्रिय गीतहरू गाइदैनथ्यो…..।
खुला सम्पत्तिमा एक पार्टी विशेषको मात्र अधिकार र वर्चश्व स्वीकार्य हुँदैन, ३ करोड नेपालीको चासो र सरोकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ ।
केपी ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा गीत गाएबापत कारबाही गरिएको हो भने यो झनै मजाक भयो । केपी ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी तथाकथित तालमेल गरेर श्रीमती दुर्गादेवी पौडेललाई सांसद बनाई संसदमा पठाउन हुने, विचरा जीवन शर्माले उहाँहरूको उपस्थितिमा गीत गाएकोमा भने कारबाही खेप्नुपर्ने ? ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा दैनन्दिनजस्तै संसदमा भाषण गरेकोमा आफ्नी श्रीमतीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि उन्मुक्ति नै प्राप्त भइरहन्छ ??